Ny lahatsoratr'i Jason McCoy momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jason McCoy
Amin'ny maha-feo azy talenta, nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tao amin'ny efitrano kely misy rihana ao ambadiky ny mic i Jason McCoy. Ny feony dia nasongadina tamina tetikasa ho an'i Dell, Walmart, Honda ary maro hafa. Manam-pahaizana manokana amin'ny famoahana horonantsary manazava sy manazava amin'ny Internet izy. Mihaino Ny fihetsik'i Jason or vakio ny bilaoginy ho an'ny mpitari-dalana sy loharanom-pahalalana momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny feo.
Alarobia, Oktobra 28, 2015 Alarobia, Oktobra 28, 2015 Jason McCoy
Rehefa mitady hiara-miasa amin'ny mpanakanto amin'ny feon-telefaona ianao ho an'ny fandefasana hafatra, horonantsary mpanazava, dokambarotra na zavatra hafa mila mpitantara za-draharaha, dia zava-dehibe ny fisafidianana olona manana talenta mety amin'ny filanao manokana. Ny feo matihanina dia mihoatra ny olona miteny teny sasany, raha ny tokony ho izy, dia afaka manao izany ianao! Ny fampiasana feon-kira manana traikefa sy mahay dia ilaina amin'ny fampitana ny hafatrao ao amin'ny